.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Blog မှာသုံးဖို့ CSS Menu လေးတွေ အလွယ်လုပ်ချင်ရင်
Blog မှာသုံးဖို့ CSS Menu လေးတွေ အလွယ်လုပ်ချင်ရင်
CSS Menu လေးတွေ လုပ်ချင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အရင်တုန်းက ဒီနေရာလေးမှာ CSS Tab Designer v2
ဆိုတဲ့ CSS Menu ဒီဇိုင်း လေးတွေ အများကြီးပါတဲ့ ဆော့ဝဲလ်တစ်ခု တင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ခုဒီနေ့မှာတော့ ဆော့ဝဲလ်နဲ့
မဟုတ်ပဲ ဝဘ်ဆိုဒ်မှာတင် ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ CSS Menu တွေကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်တာတွေ၊ လင့်ထည့်တာ
အကုန်လုပ်လို့ရတဲ့ လုပ်ရတာလည်း အရမ်းလွယ်ကူတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုကို ပြောပြပေးမှာပါ။ ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မှာ သုံးထားတဲ့
Menu ကိုလည်း အဲဒီဆိုဒ်မှာပဲ သွားပြီး လုပ်ထားတာပါ။ Drop Down, Flyout, Vertical, Horizontal, Tabbed စတဲ့
CSS Menu ပေါင်း မြောက်မြားစွာထဲက သင်ကြိုက်နှစ်သက်တာ တစ်ခုကို အမြန်သာ ပြေးပြီး လုပ်လိုက်ပါတော့နော်..
သွားရမယ့်လင့်ကို အောက်မှာ ပေးထားပါတယ်။ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ..
အောက်မှာ အနော်လုပ်တုန်းက ပုံလေးကို နမူနာ ပြပေးလိုက်ပါတယ်..
Posted by Thurainlin at 05:49
Labels: Blog, Coding, CSS Menu, Website
မြတ်သူ 17 July 2013 at 11:26
ကျွန်တော့်ဆိုဒ်လေးမှာလဲ အစ်ကိုတင်ပေးတဲ့နည်းအတိုင်းလုပ်ထားတာပါအားလုံးနီးပါး အစ်ကို့ဆိုဒ်က ဆိုလဲ မမှားပါဘူး ကျွန်တော်က ပို့စ်တွေထက်ဆိုဒ်ကိုပဲလှအောင်ဦးစားပေးပြင်ဆင်နေမိတော့ အစ်ကိုယ့်ဆိုဒ်လေးဟာလဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ဆရာတစ်ယောက်လို့ပြောရင်လဲမမှားပါဘူးခင်ဗျာ။